Search Qaababka v6 Forex Tusiyaha - Forex Muujiyeyaasha Download
Home MT4 Muujiyeyaasha Search Qaababka v6 Forex Tusiyaha
Search Qaababka v6 Forex Tusiyaha
Search Qaababka v6 Forex Tusiyaha waa tilmaame in waxaa loogu talagalay ganacsatada harmonic. Waxaa la sameeyey, waayo, barbaro iswada nidaamyada harmonic. tilmaame wuxuu u baahan yahay nooc ka mid ah fahamka suuqa Forex ee. Ma aha tilmaame ugu fiican ee bilowga ah, laakiin haddii aad si fiican u fahmaan sida ay u shaqayso, aad ku fiican tahay in la isticmaalo.
Search Qaababka v6 Tusiyaha barbaro ama foomamka saddexagal kooxa. saddexagal The fido dibadda halkan ka digayaan heerarka galo ganacsiga suurto gal ah in ganacsade ah waxay dooran karaan inay isticmaalaan. Si ka duwan tilmaamayaasha kale oo badan, tilmaame this ma siin signal sax ah laakiin waxa ay bixisaa aragtiyo ee gelinayn amarada. Ganacsatada kala duwan dhici karta Xirfado kala duwan iyadoo la isticmaalayo isla tilmaame, laakiin weli labada dhigi doonaa faa'iidada.
tilmaame Taas ayaa ka dhigaysa isticmaalka xaqiiqada ah in suuqa Forex ee kaliya ma guurto hal jiho. Haddii suuqa ayaa koror uu suuqa u kici doonaa oo markaas Dumayn waxoogaa yar ka dibna uu soo sara kaco. Waxa kaliya oo aan si joogto ah kici. Sidaas daraaddeed isticmaalaya seenyadan, mid ka mid ah ganacsade meel laga yaabaa in iibiso si ay in ay ka faa'iideystaan ​​dib u gurasho, halka mid kale dhici karta iibsan lala beegsaday isbadalkii hore.
lagugu tuday sawirka.1. Search Qaababka v6 tilmaame sharaxay.
From shaxda kor ku xusan, waxaa iska cad in aanay had iyo jeer in ganacsade fursad u leeyihiin inay u dhexeeya geliya laba Xirfado dooran doonaa. Mararka qaarkood saddexagalka kooxa laga yaabaa in kale labada geesaha isagoo at hal dhibic ka hooseeya heerka kadinka.
Si kastaba ha ahaatee, waxaad dooran kartaa in meel xadka mid ka mid ah geesaha, taas oo loo dejiyay in marka hore la garaaco si ay faa'iido qaaddaa xadka la dhigayaa ee geesaha kale. Tusaale ahaan, ka shaxda kor ku xusan ganacsade ah ayaa laga yaabaa in kaalinta iibiyay ah meesha ugu sareysa ee saddexagalka ugu horeysay kala duwan iyo meel faa'iido ka qaaddid oo ah meesha ugu hooseeya. Markaas isagu ama iyadu waxay dooran karaan in ay meel xadka iibsan at hal dhibic ka mid ah la iibiyay ee faa'iido si loo qaato iyo meesha faa'iido qaadataan, waayo, buy ah barta kale.
Fig.2. Saarid amar xadidan iyagoo isticmaalaya Qaababka search v6 Tusiyaha.
Marka la tilmaame this Ganacsi, ganacsade ah mar kasta waxay yeelan doonaan Xirfado socda ee suuqa. Haddii si fiican loo isticmaalo, tilmaame waa aalad dhabta ah waxtar buu u leeyahay ganacsatada harmonic. Its hufnaan waa hab maray inteeda kale oo ka mid ah tilmaamayaasha kale. Waxay leedahay la rumaysan karin ah 99% si ay u 100% oolnimada. ganacsiga kasta waxaa la dhigayaa isticmaalayo Tilmaame this, waxay keeni doontaa in faa'iidada. Markii ugu kaliya in ganacsade ka dhigi kara khasaaraha waa markii uu si khalad ah xagga farsamada (soo horjeeda waxa saddexagal waxay yidhaahdaan).
Maxaa ku saabsan heerarka ku heysay, jaalle ah?
heerarka Tani waxay la mid tahay heerarka Fibonacci yihiin. Si ay u bixiyaan nooc ka mid ah macluumaadka sida heerarka Fibonacci ah. Waxay kaa caawin in loo ogaado goorta in la xiro amar ama heerka in meel aad joogsato.
Waxaa aad u fiican talinayaa in ganacsade u isticmaalo heerarka hoose 100% iyo si gaar ah u 61.8% heerka isaga ama iyada heerka qaadataan faa'iido. heerarka kor ku xusan 100% waa dhif gaadhin oo sidaas waa in aan la isticmaali; xiro ganacsiga ka hor si aad u hesho fursad ay ku sii jiraan suuqa.
Search Qaababka v6 Forex Tusiyaha waa Metatrader a 4 (MT4) tilmaame iyo nuxurka tilmaame Forex ee waa in aan baddalno xogta taariikhda wxbarashada.
Search Qaababka v6 Forex Tusiyaha siinayaa fursad ay ku ogaan dhegyadii kala duwan iyo astaamaha isbedbeddelka sicirka kuwaas oo aan la arki karin in ay isha qaawan.
Sidee si loo soo dajiyo Search Qaababka v6 Forex Indicator.mq4?
Download Search Qaababka v6 Forex Indicator.mq4
Copy Search Qaababka v6 Forex Indicator.mq4 in Directory Metatrader aad / khubaro / tilmaamayaasha /
Right click on Search Qaababka v6 Forex Indicator.mq4
Tusiyaha Search Qaababka v6 Forex Indicator.mq4 waxaa laga heli karaa aad Chart
Sidee Xagga Metatrader saar Search Qaababka v6 Forex Indicator.mq4 4 Chart?
Search Qaababka v6
article PreviousQarax Waddah Attar Forex Tusiyaha
Next articleMadaxweynaha FX Forex Tusiyaha